Hagaha Fasaxa ee Suuqgeynta Moobilada | Martech Zone
Sabti, Noofembar 23, 2013 Axad, Maarso 7, 2021 Douglas Karr
Jimcaha Madow ayaa ku dhow halkan iyo 55% macaamiisha ayaa ka adeegsada barnaamij dukaamaysi taleefannadooda casriga ah toddobaad kasta! Waxaan horey u wadaagnay faahfaahin yar oo ku saabsan dukaamaysiga fasaxa iyo moobiilka sida Maxay Tahay Inay Meheraddaadu Noqo Mid Diyaar U Ah-Ciidaha iyo Sare u kaca ganacsiga mobilada, iyo waxtarka ay u leeyihiin suuqleyda.
Infograafigani ka yimid Suuq-geynta Blue Chip waxay bixisaa xog ku saabsan nooca xeeladaha ay isticmaaleyaasha moobiilku raadinayaan. Fahmitaanka goobta, waqtiga maalinta, tirada dadka isticmaalahaaga ayaa kaa caawin kara wadista iibsashada taleefanka gacanta. Iyo bixinta habab lagula taliyo iibsashada iyo dhisida liisaska wax iibsiga ayaa caawin kara, sidoo kale!
Tags: isticmaalka appbarnaamijyada kuuboonapps mobileganacsiga gacantakuuboonada wareegamobilada posdukaamaysiga mobiladaliisaska wax iibsashadasmartphonekiniin
Suuqgeynta Fashilmay: Markay Tech waxyeello ka badan tahay wanaagga